dr.tin bo bo | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
Myanmar Astrology and MaHaBote
dr.tin bo bo	# သူ့ကို နိုင်လို ဆ, ကိုခို လိုရာဆေးဖေါ်သုံးPublished March 4, 2010 | By dr.tin bo bo	အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးလောက်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ စတင် တီထွင်သူလို့ အသိအမှတ်ပြု ခံရသူကတော့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နေ အတုလ “ခင်ကြီးဖျော်” လို့ အမည်နာမတွင်တဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် အတုလ ခင်ကြီးဖျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” ထဲမှာ ဒီလို ရေးသားထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
မကာရလောပ အကျော် ခင်ကြီးဖျော်သည် သက္ကရာဇ် ၁၀၆၈-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၄ချက်တီးကျော်၌ တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ်၊ မြို့လုလင်မြို့၏ မြောက်ဖက် ပုတီးကုန်းရွာသား အဖ ဦးတိုးပြေ+ အမိ ဒေါ်မယ်ကြာ တို့မှ ဖွားမြင်သည်။ ငယ်မည်မှာ မောင်ဖျော် ဖြစ်သည်။
မောင်ဖျော်သည် အသက် ၇-နှစ်အရွယ်တွင် မြို့လုလင်မြို့၊ ကန်ရိုး ကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးထံတွင် စာပေစတင်၍ သင်ကြားရာ မြန်မာ သင်ပုန်းကြီးကို နေ့ချင်းညချင်း တခဏအတွင်း တတ်မြောက်လေသည်။ သုံးလအတွင်း ပရိတ်ကြီး ၊ နမက္ကရ၊ လောကနီတိဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ ပါဠိ အနက်တို့ကို နှုတ်တက်ဆောင်၍ သဘောသဘာဝ တို့ကိုလည်း မိမိရရ သိရှိလှသဖြင့် မေးသမျှ ခဲရာခက်ဆစ် တို့ကို ရုတ်တရက်ဖြေဆို နိုင်ပေသည်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 17 Comments	ကားဈေးကွက် နှင့် မြန်မာပြည်Published February 20, 2010 | By dr.tin bo bo	မနေ့က အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အခုရက်ပိုင်း သူ ကားဝယ်ရင် ကောင်းပါ့မလားလို့ မေးလာပါတယ်။ ဒီလို မေးခွန်းမျိုးဟာ (အရေးကြီး တဲ့မေးခွန်းလို့) ယူဆမိတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ချက်ခြင်း ပြန်ဖြေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ “အခုရက်ပိုင်း မ၀ယ်ပါနဲ့ဦး” သင်္ကြန်ပြီးအောင် ခေတ္တစောင့်ကြည့်ပါဦး . . လို့ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ ဒီကိစ္စလေးကို ကိုယ့်စာဖတ် ပရိတ်သတ်တွေထဲက ကားနဲ့ ပတ်သက် နေသူတွေအတွက် လည်း အကျိုးရှိကောင်း ရှိမလားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကားဈေးအကြီးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ ပထမ စွဲမလား မသိပါဘူး။ ဘယ်လိုမှ မယုံကြည်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုံးတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ စခန်းသွားနေကြတာ (၁၀)စုနှစ်တစ်ခုတောင် ကျော်လွန် ခဲ့ပါပြီ။ တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာ မြန်မာငွေ သိန်း (၅၀)လောက်သာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ကားတစ်စီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိန်း (၅၀၀)ကနေ (၇၀၀)လောက် ဖြစ်နေတာဟာ အံ့သြစရာ တစ်ခုလို့ပြောချင်လည်း ပြောနိုင်ပေမယ့် ဒီအနေအထားဟာ “အလွန် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အနေအထား” ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တန်ဖိုး (၅၀) လောက်ဘဲ ရှိရမယ့် ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ “ကာလ၊ ဒေသ၊ ပယောဂ တို့ကြောင့်” ရှိသင့်တဲ့ဈေးထက် (၁၀) ဆ၊ (၁၅) ဆ ဖြစ်နေတာမျိုးကို လုံးဝ ဘ၀င်မကျမိပါဘူး။ ဒီလို ပစ္စည်းမျိုးကို လက်ဝယ်ကိုင်ထားပြီး အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေတဲ့သူတွေ ကိုလည်း နဲနဲတော့ အံ့သြမိတယ်။ ဒါဟာ သိပ်ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ စွန့်စားမှုတစ်မျိုးလို့ဘဲ ယူဆပါတယ်။ “စည်းမျဉ်း၊ ဥပဒေ တစ်ချက်” ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။ သူတို့လည်း ဒီလောက်တော့ သိပါလိမ့် မယ်။ ကျွန်တော်သာဆိုရင် ဒီလို စီးပွားရေးမျိုးကို လုံးဝ မလုပ်ရဲပါ။
ဒါပေမယ့် “မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက်” ဆိုတာလို ဖြစ်နေသလား မသိပါဘူး။ မကြောက်မရွံ့ လုပ်နေကြတာဘဲ။ “ဖြစ်ခါမှ ဖြစ်ရော . . မိုးပြို အများပေါ့” လို့ ခံယူသူတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ အခု တကယ် “မိုးပြို လာပါပြီ” ။ စီးပွားရေးသမားဘ၀ကနေ ဗေဒင်ဆရာအဖြစ်ကို ပြောင်းလာခဲ့ရပေမယ့် ကုန်ဈေးနှုံးတွက်ကိန်းလေးတွေကိုတော့ သိပ်မျက်ခြေ မပြတ်မိပါဘူး။ မကြာခဏ ဆိုသလို ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ မြန်မာ့ရွှေဈေး၊ လောင်စာဆီဈေး၊ ကားဈေး၊ ကောက်ပဲသီးနှံ ဈေးလေးတွေကို တွက်ကြည့်မိပါတယ်။
ကားဈေးကွက် ပြုတ်ကျလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မြန်မာနှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်ကတည်းက တွက်ချက်ကြည့်မိပြီး နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုး/အပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်း အသိ/သတိ ပေးတန်သလောက် ပေးခဲ့ပါတယ်။ မယုံသူလည်း ရှိတယ်။ ယုံကြည်သူလည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ယောက်ဖ (မိန်းမရဲ့ မောင်) ကတော့ ကျွန်တော့စကားကို အထူးယုံကြည်သူမို့ မနှစ်ကတည်းက သူ့ဒိုင်နာကား (၂)စီးကိုအမြန်ရောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ အရောင်းစောသွားလို့ သိန်း (၁၅၀)လောက် အရှုံး သက်သာ သွားပါတယ်။(သူ့ကံလည်း ပါတာပေါ့)
ပြောခဲ့သလို မနေ့က ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက မေးလို့ ဖြေလိုက်ရတဲ့အဖြေကို ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြီး ပြောပြပါမယ်။ ကားဈေးတွေ ဒီထက်ကို ထပ်ပြုတ်ကျပါဦးမယ်။ ကမ္ဘာ့ကားဈေးကွက်က ဈေးတွေနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းလောက်ထိအောင် ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်လျှင် ကားဝယ်မည့်သူများ မ၀ယ်ကြပါနှင့်ဦး။ ကားရောင်းမည့်သူများ အမြန်ရောင်းပစ်ကြပါ။ စဉ်းစား နေလျှင် ဒီထက် ပိုပြီး ဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မည်။ မယုံကြည်သူများ စောင့်ကြည့်ပေါ့။ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ။
ဘာနည်းနဲ့တွက်သလဲ မမေးပါနှင့်။ မြန်မာနည်း၊ တရုတ်နည်း၊ ကုလားနည်း၊ အင်္ဂလိပ်နည်း ၊ ဂျစ်ပဆီနည်း အားလုံးနှင့် တွက်ပါသည်။ ဘယ်နည်းကိုမှ အစွဲမထားပါ။ အမှန်များသည့်နည်းဆိုလျှင် အကုန်ကိုင်စွဲ အသုံးပြုပါသည်။ ပြောရဲပါသည်။ ဟောရဲပါသည်။ မှန်တာ မမှန်တာက အဖြစ်အပျက်က သက်သေခံပါလိမ့်မည်။
“စပ်မိစပ်ရာ 2010” ထဲမှာ ကျွန်တော် ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားသလို ငလျှင်ဘေး၊ မြို့ကြီးများတွင် မီးအကြီးအကျယ် လောင်ကျွမ်းမှုများ နှင့် အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ပဋိပက္ခ(သပိတ်မှောက်မှုများ) ယခု လက်တွေ့ဖြစ်နေကြပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော် ဒီလိုရေးထားပါတယ် “ နှစ်သစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အစမှာ ဒီလို တနင်္ဂနွေ နဲ့ တနင်္လာဂြိုဟ်တို့ရဲ့ “အမြင်ဆိုး” ဟာ ဒီနှစ်အတွက် အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်ရှင် နဲ့ အလုပ်သမားအကြား၊ အကြီးအကဲ နဲ့ လက်အောက်လူ အကြား၊ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ နဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ အကြားမှာ ပဋိပက္ခမှုတွေ ပေါ်နိုင်တယ်။ အချင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။ ဒီလို မုချဖြစ်ရမယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်နှစ်တွေ အရ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတာ။ နောက်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်မယ် ဆိုတာလည်း ပြောဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ အာရှတိုက်က အကျယ်ကြီးဘဲလေ” လို့ ရေးထားပါတယ်။
ဖြစ်ကာမှ ဖြစ်ရော၊ ဘယ်နိုင်ငံဆိုတာကတော့ (ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ) ပြောဖို့မလွယ်လှပါဘူး။ မဖတ်ရသေးလို့ ပြန်ဖတ်ချင်သူများ ဒီနေရာကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။
ကျန်ပါသေးသည်။ အာရှ ငလျှင်ကြီး ။ ဒါကိုတော့ (ကိုယ့်အိမ်နား နီးလာလို့) မှားပါစေလို့ဘဲ အထပ်ထပ် ဆုတောင်း နေမိပါသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည် နလံထူ လာဖို့ ကတော့ 2010 ခုနှစ်6လ နောက်ပိုင်းလောက်မှ သိသာ ထင်ရှားလာပါမည်။
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ ကားရောင်းမည့်သူများ ကားရောင်းပြီးလျှင် ငွေကို ဘာလုပ်ရမလဲ မေးလာလျှင် အဖြေရှိပါသည်။ “မြေ” ၀ယ်ပါ။ (တိုက်ခန်းမဟုတ်ပါ)။ “မြေ” ဈေးတွေ တက်ပါလိမ့်မည်။
Posted in မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, Horary Astrology, hura veda, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |9Comments	# အကယ်ဒမီ ရင်ခုန်သံPublished February 5, 2010 | By dr.tin bo bo	.
မနက်ဖြန် (6.2.2010)နေ့မှာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ ကျင်းပမယ် ဆိုပါလား။ ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆုနဲ့ ပက်သက်ပြီး နီးစပ်ရာ အပေါင်းအသင်း တွေက ဒီနှစ် ဘယ်သူတွေ ရနိုင်လဲ မေးလာကြသဗျ။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် မြန်မာရုပ်ရှင် မကြည့်ဖြစ်တာလည်း အနှစ် (၂၀)လောက် ရှိသွားပြီမို့ ဘယ်မင်းသမီး မင်းသားတွေက နာမည်ကြီးနေတယ် , ဘယ်ဇာတ်ကားတော့ ဘယ်လိုကောင်းတယ် ဆိုတာတွေလည်း မသိတော့ပါဘူး။ ဟိုတုန်းက ကြားဖူးတဲ့ “ထက်ထက်မိုးဦး” တို့ “ဒွေး” တို့ “နန္ဒာလှိုင်” တို့လောက်ကလွဲပြီး နောက်ပေါက် မင်းသား မင်းသမီး အသစ်တွေကိုလည်း မသိ တော့ပါဘူး။ နာမည်မှ ကောင်းကောင်း မသိတော့ ဘယ်သူရမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းဖို့လည်း ခက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က “ဂီတ” ကို ၀ါသနာ ကြီးသလောက် ရုပ်ရှင်ဘက်မှာတော့ အင်မတန် ၀ါသနာ နည်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခု အခက်အခဲက အနုပညာလောက (အထူးသဖြင့် ရုပ်ရှင်လောက) ထဲက လူတွေကလည်း အသက်ကို အမှန် မပြောချင်ကြဘူးဗျ။ ကျွန်တော်က သုတေသန ၀ါသနာပါတော့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်တွေ လိုက်ပြီး စုဆောင်းတဲ့ နေရာမှာ အခက်အခဲဆုံးက “မြန်မာနိုင်ငံ” ဘဲဗျ။
ဘယ်နိုင်ငံက ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူဖြစ်ဖြစ် “အင်တာနက်” ပေါ်မှာ “ကလစ်” တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တာနဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ သက္ကရာဇ် အပြည့်အစုံ နဲ့ ကိုယ်ရေးအထုပ္ပတ္တိကို အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ, အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 16 Comments	# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၄)Published January 24, 2010 | By dr.tin bo bo	ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာကို ရေးလာတာ ဘာလိုလိုနဲ့ အပိုင်း(၄)ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဖတ်တဲ့လူတွေတော့ ငြီးငွေ့နေကြပြီလား မသိပါဘူး။ တစ်ချို့တွေ ငြီးငွေ့ကောင်း ငြီးငွေ့နိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ အလွန် စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းလေးကတော့ အပိုင်း (၃)မှာ မပြောလိုက်ရတဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ပါဠိစကားဖြစ်တဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ဆိုတာ မြန်မာလိုတော့ – “မနာလို ၀န်တိုစိတ်” ပါဘဲ။ “သူတစ်ပါး ကောင်းစားတာကို မနာလိုခြင်း၊ မရှုစိမ့်နိုင်ခြင်း၊ ပျက်စီးစေလိုခြင်း၊ ပျက်စီးအောင် ကြံစည်ခြင်း၊ ၀န်တိုခြင်း၊ ညူစူခြင်း၊ နှမြော တွန့်တိုခြင်း” ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်တွေ ပါဝင်နေ ပါတယ်။
“ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ” (တနည်း) “Best Life Style” အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုပြီး တရားများဟောတော့မှာလား လို့လည်း မထင်ကြပါနဲ့ဦး။ တရားမဟောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေ ချောမွေ့တဲ့ ဘ၀တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့ ကိစ္စမှာ ဒီ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ဟာ “လောဘ” တရားလိုဘဲ အရေးကြီးလှတာမို့ တင်ပြဖို့ လိုပါတယ်။
“ဣသာမစ္ဆရိယ” နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘုရားဟော ဒေသနာတွေမှာ “မှတ်လောက် သားလောက်” ရှိလှတဲ့ ပြဿနာ(၂)ခု တွေ့ဘူး ပါတယ်။ ပထမ ပြဿနာက - သုံးလောကထွဋ်ထား ဂေါတမဘုရားရှင် မပွင့်မှီ အချိန်ကာလများစွာကတည်းက “တာဝတိံသာ” နတ်ပြည်ကို အစိုးရတဲ့ “သိကြားမင်း” ဟာ လူ့ပြည်ကိုများ လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် လူတွေဟာ အန္တရာယ်မကင်း၊ ဘေးမရှင်း ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ ၊ ရောဂါများ ၊ အသက်တို ကြတာတွေကို မြင်ရတော့ ဒီလိုဖြစ်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ သူ, တွေးဆလို့ မရဘူးတဲ့။ အကြောင်းတရားကို ရှာလို့မရဘူးတဲ့။
ဒါနဲ့ လူ့ပြည်မှာ ဂေါတမဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူလာမှ သူ သိပ်သိချင်နေတဲ့ ပြဿနာကို ဗုဒ္ဓရှင်ထံမှာ လျှောက်ထား မေးမြန်း ကြည့်ပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ဘုရားက “ဟေ့ – သိကြားရေ၊ လူတွေမှာ အန္တရာယ်မကင်း၊ ဘေးမရှင်း၊ ဒုက္ခရောက်၊ ရောဂါများ၊ အသက်တို နေကြတာ တခြားတရားကြောင့် မဟုတ်ဘူးဟေ့။ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ဆိုတဲ့ တရားကြောင့်ကွ” လို့ ဟောတော် မူလိုက်ပါတယ် တဲ့။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင် | 44 Comments	ထူးခြားသော သာသနာ့အာဇာနည်တစ်ပါးPublished January 22, 2010 | By dr.tin bo bo	.
စာရေးသူဟာ (၁၀)တန်းကျောင်းသား ဘ၀လောက်ကတည်းက “၀ိပဿနာ” နဲ့ စ, ပြီး ထိတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “အသိ” သာရှိပြီး “လက်တွေ့” သိပ်မလုပ် နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တရားစခန်း (၃) (၄)ကြိမ်လောက် ၀င်ခဲ့ပေမယ့် တရားစခန်းလည်း ထွက်ရော ဒုံရင်း ဒုံရင်းပါဘဲ။ အသက်ကလည်း ငယ်သေးတာကိုး။
အသက် (၃၅) နဲ့ (၄၀)ကြားမှာ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ဘ၀လောကဓံတွေ နဲ့ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှုတွေကို ကြုံတွေ့ လာရချိန်မှာတော့ (လောကဓံကို ခံရသူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း) တရားကိုဘဲ ပြေးဖက်မိပါတော့တယ်။ ၀ိပဿနာ နည်းလမ်း တွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် ဘယ်ဟာကိုမှ အစွဲမထားဘဲ ကောင်းတဲ့ တရားမှန်သမျှ လေ့လာကြည့်မိတာ ချည်းပါဘဲ။
“မိုးကုတ်” နည်းကို အဓိကထားတယ် ဆိုပေမယ့် “မဟာစည်” ကိုလည်း လေ့လာပါတယ်။ “သဲအင်းဂူ” လည်း တီးခေါက် မိပါတယ်။ “စွန်းလွန်း” နည်းကိုလည်း ကျင့်ဘူးပါတယ်။ “လယ်တီနည်း၊ ဦးဂိုအင်ကာနည်း” တွေလည်း ချန်မထားပါဘူး။ နောက်ပိုင်း ပေါ်လာတဲ့ “အ၀ိဇ္ဇာမှ ၀ိဇ္ဇာ” သို့ တို့၊ “ချစ်ငယ် ဒဿန” တို့၊ “သန့်၊ တည်၊ ပွား” တို့လည်း လေ့လာပါတယ်။ (မိုးပြာဂိုဏ်းတော့ မပါပါဘူး၊ ဒီဂိုဏ်းက ဗုဒ္ဓဘာသာလုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဗုဒ္ဓကို ဘန်းပြပြီး ဘာသာအသစ်တစ်ခု တည်ထောင် နေတာလို့ဘဲ မြင်ပါတယ်)
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged အမှာ သတင်းစကား, အရှင် ၀ါယာမိန္ဒ, မြောက်ဦး ဆရာတော် | 27 Comments	# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၃)Published January 16, 2010 | By dr.tin bo bo	ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးအပိုင်း(၂)ကို စိတ်ပါလက်ပါ ၀င်ရောက်အားပေး ဖတ်ရှုကြပြီး အူလှိုက်သဲလှိုက် အားပေးသွားကြတဲ့ စာဖတ်သူများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စေတနာ ထိရောက်မှုအတွက် အလွန်ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။ သဘောမတူသူများ ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီလောက်လူဦးရေမျှ သဘောတူ လက်ခံတယ်ဆိုရင်ဘဲ ၀မ်းမြောက်လှပါပြီ။ စိတ်ကူးတဲ့ရာ လျှောက်ရေးတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်းပြီး ရေးထားခြင်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးကို နားလည်စေချင် ပါတယ်။ အများအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ စာသားများကို ရေးပြီး အချိန်မဖြုန်းလိုပါ။ တကယ် အကျိုးရှိတာ ဧကန်မုချမို့ တကယ် ယုံကြည်အောင် ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် အားထုတ်ပြီး ရေးပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ အတော်များများက လက်မခံဘူး ဆိုရင်တော့ အကြောင်းအရာက မမှန်လို့ မဟုတ်ဘဲ မိမိရဲ့ တင်ပြပုံ ညံ့ဖျင်းမှု ကြောင့်သာလျှင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။
အောက်က စာသားလေးတွေကတော့ – လောကကြီးမှာ ဆန္ဒပြင်းပြတိုင်း/ရည်မှန်းချက်ထားတိုင်း/လိုချင်စိတ် ရှိတိုင်းလည်း မရတတ်ပုံနဲ့ မလိုချင်တာမှ ဖြစ်တတ်ပုံ လေးတွေပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာလည်း ရှိတတ်ကြ ပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်လားဗျာ။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged # ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၃), Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင် |5Comments	# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၂)Published January 13, 2010 | By dr.tin bo bo	ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ အပိုင်း (၁)ကို ဖတ်ပြီး “ဘာလဲဟ၊ ဘာလဲဟ” ဆိုပြီး ဆန့်တငင်ငင် ဖြစ်နေကြတဲ့ စာဖတ် ပရိတ်သတ် များကို ရှေးဦးစွာ တောင်းပန်လိုပါတယ်။ တမင်သက်သက် အချိန်ဆွဲထားတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီယတြာကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေပြီး လက်တွေ့ အကျိုးထူးများခံစားနေရပေမယ့် ဒီလို သိပ်ကောင်း ပါတယ်ဆိုတာ အခြားသူ တွေ လက်ခံလာအောင် (စာနဲ့) ရှင်းပြရတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။
အခြား အဆောင်လက်ဖွဲ့ တွေလို “ရော့- အင့်” ဆိုပြီး လက်ထဲ ထည့်ပေးလို့ရတာမျိုးကလည်း မဟုတ်ပြန်။ “ထိုက်တဲ့လူ ယူကြကွာ” ဆိုပြီး “ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာဆိုတာ ဒါဘဲကွ” ဆိုပြီး ဆရာကြီး အပြောမျိုးနဲ့ ပြီးစလွယ် ပေးလိုက်ရင်ကော မဖြစ်ဘူးလားဆိုရင် ဖြစ်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ စေတနာက လူအများစု တကယ်လက်ခံ ကျင့်သုံးချင်လာအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒကြောင့် လူတိုင်း လက်ခံချင်လာမယ့် စကားအသုံးအနှုံး ၊ ဥပမာ- ဥပမေယျ တွေကို ရွေးချယ်နေရတာမို့ နဲနဲ အချိန်ယူနေရပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို စာဖတ်သူ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ နားလည်သွားစေမယ့် တင်ပြပုံ (Presentation) မျိုးဖြစ်အောင် အားထုတ် နေရပါတယ်။
တကယ်တော့ “ယတြာ”လို့သာ တင်စားပြောလိုက်ပေမယ့် အများနားလည်နေကြတဲ့ “ယတြာ” မျိုး လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေဟာ အဆိုးကြုံလာရင် “ယတြာ” ချေဖို့သာ စဉ်းစားနေကြတာမို့ ယတြာနေရာမှာ အစားထိုးလို့ရမယ့် စကား အနေနဲ့ သုံးနှုံးတင်စား လိုက်တာပါ။ အမှန်တကယ်ကတော့ ယတြာမဟုတ်ပါဘူး။ “ဘ၀နေနည်း” တစ်မျိုးပါ။ “ဘို” လို ပြောရရင်တော့ “Life Style” တစ်မျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘယ် “Life Style” နဲ့မှမတူတဲ့ “Life Style” ပါ။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင် | 53 Comments	# ဂုဏ်ယူပါသည် . . ဆရာကြီး ဒေါက်တာဒဂုန် သို့Published January 6, 2010 | By dr.tin bo bo	.
မိမိဘ၀တွင် ဗေဒင်ပညာကို သင်ယူရာ၌ “သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ” ဟူ၍ ရှိသည့်အနက် “သင်ဆရာ” မဟုတ်သော်ငြား လည်း “မြင်ဆရာ” များထဲတွင် မိမိအပေါ်၌ ကျေးဇူးအကြီးမားဆုံးဖြစ်သော “ဆရာကြီး ဒေါက်တာဒဂုန်” သည် 2009 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် “ရာဇ၀င်ထဲမှာပုဏ္ဏား” စာအုပ်ဖြင့် အမျိုးသားစာပေဆု (သုတပဒေသာ-၀ိဇ္ဇာ) ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ဆရာ၊ ဆရာ့မိသားစုများ နှင့် အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း။
ရှေ့ဆက်၍လည်း ကျန်းမာသက်ရှည်စွာဖြင့် စာကောင်းပေမွန်များ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပြီး စာပေဆုများ အကြိမ်ကြိမ်ရရှိ နိုင်ပါစေဟု ဆုမွန်များစွာဖြင့် တောင်းဆုပြုလိုက်ပါသည်ခင်ဗျား။
= ဆရာကြီး ဒေါက်တာဒဂုန်၏ ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င်အကျဉ်းကို အောက်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged ဆရာ ဒဂုန်, ဆရာကြီး ဒေါက်တာဒဂုန်, နက္ခတ်ဗေဒင် စာရေးဆရာကြီး, ပုဏ္ဏား ပညာရှိ, ဗေဒင် ကျောင်းအုပ်, မောင် ဒဂုန် |2Comments	# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၁)Published January 1, 2010 | By dr.tin bo bo	စာရေးသူရဲ့ ဗေဒင်လေ့လာမှု သက်တမ်းအနှစ် (၃၀)အတွင်းမှာ စိတ်ဝင်စားမှု အနည်းဆုံး ဘာသာရပ်ကတော့ “ယတြာ” ပညာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်ပညာကို “မ.ထ.သ” “လိုင်းပေါင်းစုံ” လို့ ခေါ်ရ လောက်အောင် အကုန် လျှောက်ပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လက္ခဏာ၊ သင်္ချာဗေဒ၊ အရှေ့တိုင်း လက်ရိုး နက္ခတ်၊ အနောက်တိုင်းနက္ခတ်၊ K.P ဟူးရား၊ မဟာဘုတ်၊ သုံးတန်ပေါ်နိစ်၊ ဆန်း၊ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ၊ အယူတော်မင်္ဂလာ၊ အာယုစန်း၊ သရောဒယ၊ တားရော့ . . . ရှိရှိသမျှ အားလုံးကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ကြွားပြောတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လိုင်းပေါင်းစုံတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြတာပါ။ ဒီလို လိုင်းပေါင်းစုံတာလည်း တကယ်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဘယ်ပညာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တီးမိခေါက်မိ ရှိချင်လို့ပါ။ အကုန်လုံး တော့လည်း မကျွမ်းကျင် ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် “ယတြာ” ပညာကိုတော့ ၀ါသနာသိပ်မပါခဲ့သလို ၊ သိပ်ပြီး မလိုက်စားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင် ဗေဒင်ပညာကိုသာ လိုက်စား နေပေမယ့် ယတြာပညာကိုတော့ သိပ်ပြီး အယုံအကြည် မရှိခဲ့ ပါဘူး။
စာရေးသူဟာ “ကမ္မနိယာမ” ကို အလွန်ယုံကြည်သူဖြစ်လို့ ကံတရားအတိုင်း “ကိုယ်စိုက်ပျိုးသမျှ ကိုယ်ပြန်ရိတ်သိမ်း” ရမယ့် နိယာမကို ကောင်းစွာလက်ခံ ယုံကြည်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိအောင် စိတ်ဓာတ်က“ခပ်ရွတ်ရွတ် ခပ်ပေပေ” ဖြစ်တော့ “ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာ ကိုယ်ပြန်ခံလိုက်ပေါ့” ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုး ထားခဲ့ပါတယ်။ “လုပ်ရဲရင် ခံရဲရမယ်” ဆိုတဲ့ သတ္တိမျိုး ငယ်ငယ်ကတည်းက ရှိသူဖြစ်လေတော့ ယတြာနဲ့ ကြောက်အားလန့်အား ကာကွယ်နေတာမျိုးကို ကိုယ်တိုင် မလုပ်ချင်သလို သူများကိုလည်း လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ သူများကိုသာ ဗေဒင်ဟောပေးပေမယ့် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဗေဒင်တွက်မကြည့်ဘဲ လုပ်ချင်ရာ စွတ်လုပ်လို့ အမှားတွေ့ခဲ့ပေါင်းလည်း များခဲ့ပါပြီ။ ဒီတော့ ၀ါသနာအရသာ “ယတြာပညာပိုင်းစာအုပ်တွေ” မျိုးစုံအောင် စုဆောင်းထားပေမယ့် သေသေချာချာ မလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင် | 21 Comments	# 2010 နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်Published December 23, 2009 | By dr.tin bo bo	.
မကြာခင် ရောက်လာတော့မယ့် ခရစ်နှစ် 2010 နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဗေဒင်လောကမှာ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ပြောဆို နေကြတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်။ နှစ်သစ် တစ်နှစ်ကို ကူးပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ ဒီနှစ်မှာ ဘာတွေထူးထူးခြားခြား ဖြစ်မလဲ ဆိုတာဟာ ဗေဒင်ပညာ ရှင်တွေရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ဘဲ မဟုတ်ပါလား။ ပြောကြဟောကြ မှာပေါ့။ လူတွေကလည်း သိချင်နေကြ တာကိုး။
စာရေးသူအနေနဲ့တော့ နှစ်သစ်မှာ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဟောကိန်းထုတ်နိုင် လောက် အောင် ပညာ မကြွယ်သလို၊ ဟောလည်း မဟောရဲပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ဟောကိန်း ဆိုတာ ကိုယ့်တတ်ထားတဲ့ ပညာလေး နဲ့ စာရင် သိပ်ကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်း နေလို့ပါ။
ဒါပေမယ့် မနေ့ကထွက်တဲ့ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထင်ရှားတဲ့ နက္ခတ်ဗေဒင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ပြောကြားချက် တစ်ခုကိုတော့ ဘ၀င်မကျလှဘူးခင်ဗျ။ စာရေးသူဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် သူများကို ဝေဖန်ဖို့ အလွန်ဝန်လေးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများကို ဝေဖန်တာဟာ အကျိုးထက် အပြစ်ကို ပိုဖြစ်စေမှန်း သိပါတယ်။ အနောက်တိုင်းဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ “လောကမှာ အလွယ်ဆုံး အလုပ်ဟာ သူများကို အပြစ်ရှာခြင်း(ဝေဖန်ခြင်း)ဖြစ်တယ်”တဲ့။ နောက်တစ်ခုက ဝေဖန်ရေး လုပ်တာဟာ ကိုယ့်ကို ရန်သူပေါများအောင် လုပ်တဲ့နည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် ပညာရှိပြီး သဘောထား ကြီးတယ်ပြောပြော ကိုယ့်ကို အဝေဖန်ခံလိုက်ရရင် နဲနဲတော့ “တင်း” သွားကြတာချည်းပါဘဲ။ ဒါကြောင့် လူမုန်းများမယ့် ဝေဖန်ရေးလုပ်ခြင်းကို တတ်နိုင် သလောက် ရှောင်ကျဉ်ပါတယ်။
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင် | Tagged 2010 နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 16 Comments	# ရောင်စုံခြယ်တဲ့ကမ္ဘာPublished December 5, 2009 | By dr.tin bo bo	.
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ အရောင်အသွေး စုံလင်လှတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာအားလုံး အရောင် ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှ ရှိကြပါတယ်။ ကုန်းပေါ်မှာသာမက ဟိုး အလွန်နက်ရှိုင်းလှတဲ့ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာများထဲမှာကျက်စားကြတဲ့ သက်ရှိ သတ္တ၀ါများမှာ တောင်မှ အလွန်ဆန်းကျယ်လှတဲ့ အရောင်တွေ ရှိကြတာကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအထဲမှာ လူဆိုတဲ့ သက်ရှိသတ္တ၀ါ ကတော့ အခြားသော သက်ရှိများထက် ပိုတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ သတ္တလောကမှာ အသိဉာဏ် အရှိဆုံး သတ္တ၀ါဖြစ်တာနဲ့ အညီ သဘာဝကပေးတဲ့ အရောင်များသာ မက တီထွင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဆေးရောင်စုံများနဲ့ မိမိတို့ ၀တ်ဆင်တဲ့ အ၀တ်အစားများ၊ မိမိတို့ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနေကြတဲ့ အရာဝတ္တုများ၊ နေအိမ်အဆောက်အဦးများပါမကျန် ဆေးရောင်စုံအမျိုးမျိုးနှင့် ချယ်သ ထားလိုက်ကြတာများ- လူ့ကမ္ဘာ လူ့လောကကြီးဟာ အရောင်အသွေး တွေ စုံလင်တောက်ပလွန်း နေပါတော့တယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အရောင်အမျိုးမျိုးကို ပေါင်းစပ်တီထွင်လိုက်ကြတာ တစ်ချို့အရောင်တွေဆိုရင် ဘယ်လို အမည်နာမ တပ်ခေါ်ရမှန်း မသိအောင်ကို ဆန်းကျယ်လှပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် မူလအခြေခံအရောင်ကတော့ (၃)ရောင်သာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “အနီရောင်၊ အပြာရောင် နဲ့ အ၀ါ” ရောင် တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အရောင်တွေဟာ ဒီအခြေခံအရောင် (၃)ရောင်ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာရတာချည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနီ နဲ့ အပြာကို စပ်လိုက်ရင် ခရမ်းရောင် ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၊ အပြာ နဲ့ အ၀ါကို ရောစပ်လိုက်ရင်တော့ အစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပန်းချီဆရာများ၊ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်နာများက ပိုပြီးသိကြပါလိမ့်မယ်။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged Myanmar Astrology, ဂမ္ဘီရ, ရောင်စုံခြယ်တဲ့ကမ္ဘာ |6Comments	# ၀ဋ်Published November 30, 2009 | By dr.tin bo bo	.
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က “ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် တန်ခိုး” ဆောင်းပါးကို ရေးပြီးချိန်မှာ စိတ်ပါလက်ပါ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုကြတာကို တွေ့ရတာကြောင့် ရယ် ၊ အခုဆောင်းပါးကို ဆက်မရေးရင် အရင်ဆောင်းပါးက သိပ်ပြီး ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်သေးတာကြောင့် အခုထပ်ပြီး “၀ဋ်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ဆက်ပြီး ရေးချင်ပါတယ်။
ဗေဒင်ပညာပေး ၀က်ဆိုဒ်မှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေ ၀င်ရေးနေလို့ ဒီဆရာတော့ “လိုင်းကြောင်” သွားပြီလားလို့တော့ မထင်ကြပါနဲ့ဗျာ။ ဗေဒင်ပညာပေးတွေလည်း ဆက်ရေးသွားမှာပါ။ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်တွေ ဗေဒင်မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကိုလည်း ဖြေပေးသွားမှာပါ။ အခုတော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဆက်ပြီး ရေးပါရစေဦး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ “လောကမှာ အကျိုးတရား ဟူသရွေ့ဟာ အကြောင်းတရား ကင်းပြီး ဖြစ်ရတယ်” လို့ မရှိပါဘူး။ အကျိုးရှိရင် အကြောင်း ရှိရမယ်။ Cause and Effect ပေါ့။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဒီလို အသက်(၁၈)နှစ်မှာ အသက်ဘေးကနေ သေလုမျောပါး ရုန်းကန်ပြီး လွတ်မြောက် လာခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်(အကျိုးတရား)ဟာ ဒီဘ၀မှာတွင် ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်တစ်ခု (အကြောင်းတရား) နဲ့ စပ်ဆက် ပတ်သက်နေလို့ပါဘဲ။
“၀ဋ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် ကြားဘူးကြမှာပါ။ “၀ဋ်လည်တတ်တယ်” တို့၊ “၀ဋ်ကြွေးကြမ္မာ မပြေးသာ” တို့၊ “၀ဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာ အပ”တို့ “၀ဋ်တော် (၁၂)ပါးတို့” ၊ “၀ဋ်ဆိုတာ နောင်ဘ၀မကူးဘူး” ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေ အမြဲလိုလို ကြားနေကြရတဲ့ စကားတွေ မဟုတ်ပါလား။ အဲဒီထဲကမှ “၀ဋ်ဆိုတာ နောင်ဘ၀မကူးဘူး” ဆိုတဲ့ စကားလေးဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀၊ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်နဲ့ လုံးဝ သက်ဆိုင်နေလို့ ဒီ “၀ဋ်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ဆက်ပြီး ရေးသားလိုက်ရကြောင်းပါခင်ဗျား။
Posted in ဓမ္မစကား | Tagged Buddhist's Talks, ဓမ္မစကား | 14 Comments	# ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် တန်ခိုးPublished November 26, 2009 | By dr.tin bo bo	.
အခုရက်မှာ ဆောင်းပါးအသစ်လည်း ရေးချင်စိတ်မရှိ၊ ဗေဒင်မေးထားတာ တွေလည်း ဟောချင်စိတ်မရှိဖြစ်နေပြီး ကိုယ့်ဝက်ဆိုဒ် ကို တောင်မှ ပြန်မကြည့်ချင်အောင် စိတ်က မ၀င်စားဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာ ဒီနေ့ထုတ် 7day News ဂျာနယ်ကို ကောက်ကြည့်ပြီး ဟိုလှန်၊ ဒီလှန် လှန်နေရင်းက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို တွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားပြီး ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရင်း ကိုယ့်ရဲ့ အဖြစ်နဲ့ တူလွန်းလို့ ဆောင်းပါးတစ်ခု ကောက်ရေးချင်တဲ့စိတ် ပေါ်လာလို့ ချက်ခြင်း ကောက်ရေးပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဆောင်းပါးနာမည်က “ဘုရားပေးတဲ့ အသက်” တဲ့။ ဖြစ်ရပ်ကလေးကတော့ “ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း မုံရွာ နဲ့ ဟုမ္မလင်း” ကူးတို့ရေယာဉ်တိမ်းမှောက်ပြီး လူ့အသက် (၂၀-၃၀)လောက် တိမ်းပါးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်မှာ မသေဘဲ လွတ်မြောက် လာသူတစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံကို ရေးသားထားတာပါ။ ဒီ စက်လှေ တိမ်းမှောက်မှုမှာ ရေလုံးဝ မကူး တတ်ပေမယ့် ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော် (သံဗုဒ္ဓေဂုဏ်တော်) ကြောင့် အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်လာသူ “ကိုအောင်နေလင်း” ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေထဲမှာ မြုတ်သွားလိုက် ၊ ပြန်ပေါ်လာလိုက် ဖြစ်နေရင်း ရေစောင့်နတ်၊ မြေစောင့် နတ်တွေကို အကူအညီတောင်းပြီး “သံဗုဒ္ဓေ” ဂုဏ်တော်ကြီးကို အဆက်မပြတ်ရွတ်နေရာက ရေထဲက ပြန်အပေါ် မှာ ပလပ်စတစ်ပုံးကြီးတစ်ပုံးက ခေါင်းပေါ်အတည့်ရောက်လာပြီး ဒါကို ဖက်တွယ်လိုက်လို့ အသက်ဘေးက လွတ်လာတဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်မိတော့ ကိုယ့် အဖြစ်အပျက်နဲ့ တူလွန်းလှလေခြင်း ဆိုပြီးဒီဆောင်းပါးလေးကို ကောက်ရေး လိုက်ပါတယ်။
Posted in ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ် | Tagged ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် တန်ခိုး, ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ် | 13 Comments	Reports to my Friends !
မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ မှ စ၍ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး ဘေးခပ်သိမ်းရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေသော်
# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင်
# အပူဒဏ် ခံနိုင်စေသောနည်း
# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ
# အရောင်(၉)ရောင် နှင့် စိတ်သဘောထား
# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင်
# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂)
# မတ်လ အတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်း အကျဉ်း
# ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးသော ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်
# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ
# ယနေ့ မွေးဖွား ရင်သွေးများ (Today’s Born Babies)
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,709)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,971)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,788)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,367)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,429)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,573)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,593)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,955)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,296)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,273)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,101)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,051)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,837)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,802)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,303)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,134)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,494)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,177)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,828)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,683)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,610)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,551)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,263)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,243)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,906)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,692)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,478)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,025)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ (1)
ဘ၀ ဒဿန (7)
သိဖွယ် မှတ်ဖွယ် စဉ်းစားဖွယ် (1)
အမှာ သတင်းစကား (15)
အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ (4)
မြန်မာ့ ဆေးပညာ (2)
မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် (33)
ဆရာ ဇာနည် KP (အခါပေး ဗေဒင်)
တားရော့ နှင့် လီနော်မန်
သတင်း, ဂျာနယ်, မဂ္ဂဇင်း
မြန်မာ ပို့စ် ဂျာနယ်
Forever Friends ထာဝရ သူငယ်ချင်းများ
Free Software Download ပေးနေတဲ့ဆိုဒ်
Myanmardaily.Net အကောင်းဆုံး မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ စုစည်းရာ
U Tun Lwin's Weather News
Yatanarpon Web Portal
သက်ပိုင်သူ ရဲ့ ဘလော့ဂ်
ရွှေစူး ရဲ့ ဘလော့ဂ်
Randomize calculation အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိနေသူများ
5 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.